Maika avokoa ny zava-drehetra | NewsMada
Maika avokoa ny zava-drehetra
Adihevitra na vina politika amin’izao ny amin’ny hoe tokony hanovana na hanamboarana governemanta. Hanao ahoana? Ho hita eo… Tompon’ny teny farany ny filohan’ny Repoblika. Na ny amin’ny fanoloana na tsia ny praiminisitra lehiben’ny governemanta aza izany; eny, na miainga amin’ny hoe tolokevitry ny maro anisa anivon’ny Antenimierampirenena izay hoe fanolorana praminisitra izay. Mandra-pitrangan’izay hitranga, tsy ady seza intsony izao no inona: tsy zava-dehibe, tsy mahamaika.
Amin’izao fisasahan’ny fe-potoam-piasan’ny mpitondra izao, efa tena azo tsaraina amin’ny asany sy ny fomba fiasany ny mpitondra. Tsy vitan’izany, tsy inona intsony koa izay hoe fifampidinihana ho amin’ny fiaraha-mitantana handaminana ny adilahy politika mahaza-dratsy ny sasany ka ketrehina lava: fanararaotan’ny mpitady seza, tsy mety handrosoana amin’ny tetezamita lava… Aleo ho tomponandraikitra feno sy tanteraka amin’izay ataony sy vitany ny mpitondra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga.
Ao anatin’izay tomponandraikitra feno sy tanteraka amin’izay vitany izay ny minisitra tsirairay avy. Inona ny asa mivaingana, azo refesina, miantraika mivantana amin’ny fiainam-bahoaka… ? Tsy vitan’ny fisehoana na ny fitenenana matetika amin’ny haino aman-jery io. Na hoe misy ny zanaka an-trano… Eo ny vahoaka mitsara izay tsapany sy iainany amin’izay atao sy vitan’ny isan-tsehatra amin’izao fotoana izao: misy fihatsarana ve ny fiainam-bahoaka, na ny amin’ny vidim-piainana aza, ohatra… ?
Izany rehetra izany no hanombanana sy hitsarana ireo minisitra tsirairay avy: iza ny manao inona, aiza ary mankaiza? Tsy vitan’izay, mahita sy mahatsapa izay iainany isan’andro ny vahoaka ifotony. Maika avokoa ny zava-drehetra? Tsy misy tsy iharan’ny dona noho ny fahantrana lalina sy maharitra amin’izao. Midona amin’ny vahoaka koa ve izay atao? Sao tsy araka ny asa atao sy vita ny raharaha? Na toy ny angady ka ny lelany mihosim-potaka sasan-drano fa ny zarany indray no hosora-menaka.